Qoor-Qoor & Lafta-gareen oo ku kulmay magaalada Muqdisho
Kulamo siyaasadeed ayaa ka socda magaalada Muqdisho si xal loogu helo caqabada ka taagan doorashada Soomaaliya, taasoo keentay in wax qabad la’aan waqtigeedii la qaban sanadka 2020 iyo jadwalka ay isku raaceen Hogaamiyayaasha DFS iyo Dowlad Goboleedyada ee lagu soo afjarayo Doorashada Baarlamanka BFS.
Caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala guddiga ayaa ah: dowladda oo gudbisay guddi diidan, xubnaha guddiga ayaa la sheegay inay kujiraan shaqsiyaad ka socda Madaxtooyada & Amniga, Puntland & Jubbaland kuwaas oo shuruud uga dhigay inay soo magacaabaan xubnaha, & Ra’iisul wasaare kuxigeenka Mahdi Maxamed Guuleed iyo Guddoomiyaha BFS Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa isku dhacay gobollada waqooyi ee Gobaladda Waqooyi.
Ilo-wareedyo mustaqbalka ah in xallinta walaacyada helitaanka iyo caqabadaha ka sarreeya caasimadda ay billaabeen shirar ku saabsan nidaam shaqo oo kala duwan ayaa la xiray Muddadii Hogaamiye Maxamed iyadoo heerka 8 Febraayo 2021 kaliya ay ka harsan tahay 33 maalmood.
Madaxweynayaasha Maamulada Galmudug iyo Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay wada hadallo la yeeshay dhinacyo kala duwan oo uu ka mid yahay Hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Farmaajo oo ay ka wada hadleen dadaallada lagu doonayo in lagu xaliyo caqabadaha hortaagan qabashada doorashooyinka.
Labada dhinac waa qoorta-Collar & Laftagareen waxaana uu Madaxweynuhu ogolaaday in mar kale la kulmo todobaadka soo socda si loo yeesho, iyadoo ajandaha miiska ee baahida loo qabo in si qoto dheer loo lafaguro si qoto dheer looga fiirsado talaabooyinka la qaadayo mustaqbalka si loo sheego ilo.
Magaalada Garoowe waxaa goor dhow lagu go’aamiyay in Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C / raxmaan, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland ay dadaal u galeen sidii la isugu keeni lahaa hogaamiyayaasha dowladda Federaalka Soomaaliya, Midowga Musharaxiinta. iyo dhinacyada ka soo horjeeday hanaanka doorashada ee Soomaaliya.
ten applicants request the cancellation of this system